Ny Galaxy M30 dia ho tonga miaraka amin'ny bateria 6.000 mAh Androidsis
Ho tonga miaraka amin'ny bateria goavambe ny Galaxy M30s
Samsung's Galaxy M range dia mandray tsara eny an-tsena. Noho io antony io, ny marika Koreana dia miasa amin'ny maodely vaovao, toy ny Galaxy M30s, Manomboka izao no ahitantsika vaovao marobe amin'ity herinandro ity. Ity maodely ity dia tokony hahatratra ny tsena vetivety araka ny fantatsika. Ny zavatra nambara dia hanana bateria lehibe izy.
Ny Galaxy M30 dia hanana bateria lehibe indrindra ao anatin'ity faritra Samsung finday ity. Ny orinasa mihitsy no nanambara ny haben'ny bateria hananan'ity modely vaovao ity, izay antenaina ho tonga tsy ho ela any amin'ireo magazay. Azo antoka fa tany India aloha.
Batterie 6.000 mAh no miandry antsika amin'ny Galaxy M30s. Ny orinasa dia nahantona afisy izay niresahan'izy ireo ity fahaizan'ny bateria ity, ho fanampin'ny fampisehoana fa ho maodely ao amin'ity fianakaviana ity izy. Tsy voamarina fa io no telefaona mampiasa azy io, saingy efa voalaza amin'ny haino aman-jery isan-karazany izany.
Ankoatry ny modely misy bateria lehibe indrindra hitantsika tao amin'ny Samsung. Ka io koa dia maneho fiovana lehibe ho an'ny mpanamboatra Koreana amin'io lafiny io. Batterie lehibe kokoa, izay handika fahaleovan-tena tsara ho an'ity eo afovoany vaovao ity.
Efa miandry ny fahalianana ity telefaona ity, tsy tokony haharitra ela akory vao hahatratra ny tsena. Nanipika izany ny haino aman-jery sasany ny Galaxy M30 dia natomboka tamin'ny volana Aogositra, araka ny efa nolazainay taminao. Na dia tsy fantatra aza raha hihaona aminy isika afaka andro vitsivitsy avelantsika amin'ity volana aogositra ity. Toa tsy azo inoana izany.
Na ahoana na ahoana, toa saika vonona ny hamely tsena. Noho izany Samsung dia manohy manavao ny eo afovoany toy izao. Ny zava-drehetra dia manondro fa ity Galaxy M30 ity dia ho safidy tsara ao anatin'ity elanelam-potoana ity, izay tsy isalasalana fa hisongadina noho ny batterie lehibe ananany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ho tonga miaraka amin'ny bateria goavambe ny Galaxy M30s
Meizu 16s Pro: Ny farany ambony amin'ny marika sinoa
Realme XT: Ny telefaona fakan-tsary 64MP voalohany